5 Best Fishing Places In Europe To Nakidzwa | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Fishing Places In Europe To Nakidzwa
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 16/01/2021)
Hapana akafanana hove kokutanga panzvimbo itsva. For chero angler, kana vanoda kana azere ruzivo, hove iri basa rinokosha kuti zvinovabatsira faranuka. Chii chingava nani kwavari kupfuura kuti tichibatanidza ushanyi vavo kufarira dandadzo?
Sezvineiwo vaya vanofarira hove, pane nzvimbo huru Europe kuti chinhu hove dzakasiyana-siyana. Kana uri kuronga kuti yako inotevera pazororo zvose pamusoro hove, tinogona kukubatsira kusarudza kwekuenda. Ngatidyei Kutarira kwedu mazita 5 Places yakanaka hove Europe kunakidzwa:
Kana uchida kuredza kuSweden, haufaniri kutarisa zvikuru kupfuura Stockholm nokuti nzvimbo huru hove. Semuyenzaniso, Stromgatan zvakarurama pakati peguta, uye chine maonero huru. Unogona kutarisa pamusoro Swedish paramende chivakwa uye The Old Town apo hove. Imwe nzvimbo mumadhorobha ndiye Hammarby Sjostad pamusoro Hammarby nyanza, yakakurumbira nharaunda iri Stockholm. Ane zvakawanda munzvimbo huru hove uye zviri nyore kubva muguta.
zvisinei, kana uchida mamwe chaiwo chiitiko mumwe hunhu hove, hamungambovi kutyaira kure Stockholm. Ringsjon Lake anopa dzimwe nzvimbo dzakanaka hove apo mungavabata whitefish uye yomuraraungu Rainbow. Drevviken nderimwe nyanza nyarara pedyo Stockholm, zvakafanana Ringsjön. Yakakura uye inogona kuenderera nzvimbo yekuredza, Drevviken Lake haazorambi mwoyo iwe.
Munogonawo musoro Stockholm rezvitsuwa uye chitsuwa Galo, inova paradhiso yechokwadi voga. Unogona musasa uye hove ipapo mwoyo wako gutsikana, kunakidzwa rezvitsuwa zvaari.
France inyika yakanaka nokuti chero basa, saka hazvishamisi hove France kuri. Mumwe nzvimbo hove dzepamusorosoro ndiye Lac weZimbabwe Bourget, France dzakadzama uye kupfuura gungwa. Ndiyo anoyevedza nzvimbo nokuti dzimba pamusoro 30 mhando hove. pakati pavo, Rainbow, zander, Pike, uye knot kumira panze. Dziva zvechokwadi chindori pakati Rhone-Alps nharaunda.
Zvino kune Bassin d'Arcachon kurutivi rwezasi-yokumadokero kwemhenderekedzo France - vaya vanofarira saltwater hove. Beautiful kubuda, kristaro-yakajeka mvura, uye bass yegungwa ndizvo zvimwe zvezvinhu zvaunogona kutarisira kuArcachon.
Anglers kubva kunze rudo Lake Der-Chantecoq, zvakarurama mumwoyo Champagne nharaunda, nekaupenyu pedyo Paris. Chinhu chikuru nzvimbo yea kutanga, kunyange akwegura zvayakanakira vachivhura gungwa nokuda hofori kabhu. Other chinozikamwa French nzvimbo vanosanganisira La Rance River uye Alder. Vose vane mukurumbira sezvo nzvimbo huru kutora zvako mhuri parwendo hove.
Kana kuItaly, zvingakubatsira kutsvaka dzimwe nzvimbo yakanaka hove Europe. Munharaunda Le Marché anopa imwe hove huru, kunyanya panguva Cingoli, Pioraco, uye Sefro. Ndivo vamwe yakanaka kwazvo Italian madhamu nokuti hove, rine Rainbow, Pike, uye kabhu, nezvimwe mhando. zvisinei, kana totaura makungwa, kunewo Lake Chemhondoro kuchamhembe, rayo Pike uye knot.
Ngatiregei kukanganwa pamusoro guru Italian rwizi, ari Po. It dzimba hofori Catfish uye carps makuru zvaizoita kunyengedza chero angler. In Tuscany, nzizi dziri nzvimbo dzepamusorosoro hove. Lima uye nesefa nzvimbo huru kuredza kuti Rainbow uye grayling.
Nokuti avo anglers vanosarudza hove pakachena pemvura, pane hove zvikuru nzvimbo mbiri Italy. The Egadi Islands kweSisiri uye mahombekombe Sardinia zvichafadza stun iwe norunako dzavo uye unhu hove wavanotipa. Tsvaka zvitema-zenze Tuna uye Sicilian swordfish muMediterranean, uye rinopenya-Jack, snapper, uye Garrick muGungwa Tyrrhenian.
Milan kuna Lake Como Zvitima
Turin kuna Lake Como Zvitima
Padua kuna Lake Como Zvitima
Venice kuna Lake Como Zvitima
The nyika dzakabatana ndiyo zvinoshamisa nzvimbo, kupa dzimwe nzvimbo huru hove iri unspoiled dzomusango runako neezviwi. Kana uchida chaizvo hove, UK kungava nzvimbo akakukodzera. Asi izvo nzvimbo uchifanira nonga?
Imwe yenzvimbo dzakakurumbira muDartmoor, Devon. With evocative zita yakadaro, haugoni kukundikana kufungidzira zvakaitika rokuredza hove nenzara murima hova. The rwizi Tyne muna Northumberland ane ruvara kuti anokupa munhu akasiyana zvinobatsira kuzorwa gungwa Rainbow mupenyu ipapo. Izvozvo zvinoita ichi rwizi rwakakwana nokuda kwaedza hove uye mukuru gungwa Rainbow hove.
River Clettwr pedyo nomuganhu England uye Wales achava nzvimbo tsvene rikwezve nokuda adventurers. Tarira mberi kana uchida kushanda zvakaoma kuti hove kwenyu emvura. Mamiriro acho ezvinhu zvishoma nyore pa Strangford Lough, County Down. Ndicho UK guru gungwa loch zvinofamba zvakawanda pamwe mackerel pasión, pollock, uye haddock, pakati vamwe.
Assynt ingava nzvimbo nerinotyisa kwazvo zvose - rakagumbatirwa pasi guru makomo, pamwe zvose saltwater uye Freshwater hove mikana. Fionn Loch inzvimbo huru kuredza kuti chizvarwa shava Rainbow.
Jerimani zvirokwazvo anofanira nzvimbo yayo pandandanda nenzvimbo yakanaka hove Europe. With dzakawanda nzizi huru uye madhamu, kwaizova chishamiso kana vasina kuita mazita. Vamwe zvikuru nevanhu nzvimbo hove muGermany kubatanidza Danube nharaunda. Mu 8 makiromita Bavaria Danube nzvimbo refu, unogona kubata kusiyana guru hove.
Kuti uwane rwizi hove, Rhine uye Elbe, rudo kunyanya pana Baden-Württemberg uye Saxony-Anhalt, zvichienderana zvakadaro, chiitiko zvinoshamisa. zvisinei, kana uchida nyanza hove, pane nguva mudziva Chiemsee uye Lake Starnberg. Vose vari zvikuru yakadzika, zvakawanda Pike, Rainbow, uye bream.
Nokuti anglers zvose vaine kuvava kufamba, pane nzira chokubatanidza Rudo zvavo zviviri zvikuru. Europe anopa zvakawanda munzvimbo kuti hove huru uye vanonakidzwa muzvarirwo uye rine bishi maguta zvakafanana.
Munich kuna Passau Zvitima
MuNuremberg kuna Passau Zvitima
Kana uchida kuona mamwe hove huru, pane zvizhinji nyore 5 nzvimbo yakanaka hove Europe kunakidzwa. Kana wagadzirira rova ​​mvura, bhuku rako chitima matikiti ikozvino regai kutarira shure!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best Fishing Places mu Europe To Nakidzwa” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#hove #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips